Dowlada oo ka hadashay tallabadii lagu tarxiilay siyaasi ka tirsan mucaaradka NASA – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo ka hadashay tallabadii lagu tarxiilay siyaasi ka tirsan mucaaradka NASA
Wasaradda arrimaha guda ee dalka ayaa ka dhawajisay in Miguna Miguna oo ka mid ah siyaasiyiinta urur weynaha mucaaradka Nasa la tarxillay galinkii dambe ee shalay maadama uusan dib u raadsan jinsiyaddiisi Kenya kadib markii uu helay dhalasha wadanka loo musaafuriyay ee Canada.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mwenda Njoka ayaa bartiisa Twitarka ku soo qoray in Dr. Miguna sanado la soo dhaafay uusan sida habboon isugu taxalujin in la siiyo aqoonsiga muujinaya inuu dalka u dhashay maadama uu haystay dhalasho wadan kale.
Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii murashaxii xilka gudoomiyanimo ee ismaamulka Nairobi ee sanadkii hore Miguna Miguna loo tarxiiilay dalka canada kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu xabsi ku jiray.
Qareenada u doodayay ee kala ah Nelson Havi iyo Cliff Ombeta ayaa sheegay in Miguna la saaray diyaarada KLM oo ku wajahneyd magaalada Amsterdam oo u sii gudbi doonto Canada.
Nelson Havi ayaa ka dhawajiyay inay qaadanayaan go’aan ay uga soo horjedaan midka ay dowladu ku dhaqaaqday.
Waxay wararku intaasi ku darayaan in sababta keentay in Miguna oo u dhashay Kenya loo diro Canada ay tahay in markii jimcihii la soo dhafay la qabtay kadib dowlada dalkaasi ay walaac ka muujisay maadama uu halkaasi sanado badan ku noolaa dhalashada wadankaasina uu haysto.
Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii shalay siyaasigan oo ka tirsan garabka mucaaradka ee Nasa la soo taagay maxkamad ku taalo ismaamulka Kajiado.
Waxaa lagu soo oogay dacwad ah inuu ka qeyb galay xafladii uu isku dhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka Nasa Raila Odinga oo dowlada ay sheegtay inay sharci darro ahayd, inuu sameeyay khiyaano qaran maadama uu si cad uga dhawajiyay inuu saxiixay warqadii uu Mr. Odinga ku dhaartay iyo inuu xubin ka ahaa dhaqdhaqaaqa qaran ee NRM oo ay dowladu mamnuucday.
← Kenyaanka oo maanta ugu dambeyn gudbinaya afkaartooda ku aadan golaha wasiirada ee la soo magacaabay
85 qof oo weli la la’yahay kadib dhulgariir ka dhacay Taiwan →